Rooppur: Rosia kely ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
'Rooppur sa Russpur? Amarino indray ny anarana tsy ofisialy'
Voadika ny 20 Novambra 2021 3:56 GMT
Fanehoana an-tsary ny Toby mpamokatra angovo nokleary ao Rooppur naorina tao an-tanànakelin'i Rooppur ao amin'ny distrikan'i Pabna ao Bangladesh. Pikantsary avy amin'ny YouTube video avy amin'ny fantsona ‘Touch Your Mind’. Fampiasana azy araka ny mety.
Feno Rosiana eny an-dalambe, any amin'ny trano fisakafoana ary any amin'ny toeram-pivarotana lehibe, dia feno sora-baventy voasoratra amin'ny teny rosiana ihany koa ny takela-by Bengali izay mahatonga fanontaniana hoe: “Inona no iraisan'ny tanàna miadam-pandeha ao amin'ny faritr'i Ishwardi (antsoina hoe Upazila) ao amin'ny Distrikan'i Pabna ao Bangladesh amin'ny firenena midadasika indrindra eran-tany?”
Ny valiny dia ny Rosiana Rosatom State Atomic Energy Corporation manangana fotodrafitrasa lehibe toby nokleary 2,4 gigawatt ao Rooppur, anisan'izany ny fametrahana milina mpameri-tosika nokleary VVER-1200/523 miisa roa. Nanomboka tamin'ny taona 2016, nampisy fiovana goavana tao Rooppur ny halakin'ny fivoaran'ny tetikasa—sy ny fisian'ireo mpahay siansa sy matihanina ara-teknika an'arivony vitsivitsy— avy any Rosia ny ankamaroan'izy ireo :
Vokatr'izany, niova tanteraka ny endri-tany ao amin'ny faritra. Trano manaka-danitra, toeram-pivarotana sy sekoly lehibe vaovao, ary ahitana ireo trano fandraisam-bahiny lenta manerantany manakaiky ny ony Padma indray izao no endri-tany fahita. Nianatra fiteny rosiana ny mpivarotra mba ahafahany mivarotra amin'ireo Rosiana mpiasa ka lasa mihabetsaka ireo takelaby voasoratra amin'ny fiteny anglisy sy rosiana. Nihalehibe ho lasa Rosia kely ao anatin'i Bangladesh i Rooppur.
Ny fiandohan'ny toby nokleary
Nila vahaolana i Bangladesh mba hamaliana ny fitomboan-tinadin-kerinaratra haingana, izay mifandraika amin'ny Harinkarena faobe. Tamin'ny taona 2008, nanolotra famatsiambola tetikasa angovo nokleary i Shina, saingy roa taona monja taty aoriana, nanao fifanarahana momba ny angovo nokleary mitentina 12,65 lavitrisa dolara amerikana tamin'i Rosia i Bangladesh, ka ny 90 isanjaton'izany dia novatsian'ny fampindramam-bola avy amin'ny governemanta Rosiana mba hiantohana ny famokarana angovo mora.
Namatsy vola sy nanangana milina mpamerin-tosika manerana ny firenena maro ny orinasam-panjakana rosiana Rosatom State Atomic Energy Corporation (ROSATOM) mba hampitomboana ny hery ara-jeopolitikan'i Rosia sy hahazoana tombony ara-bola ho an'ny firenena. Araka ny fifanarahana, nanamboatra ozinina 1.062 acre ao Rooppur araka ny maodeliny sy ny fomba fiasany (BOO) ny ROSATOM; hatramin’izao, 40 isanjaton’ny asa no vita.
Nanomboka ny asa tamin'ny taona 2016, vinavinaina ho afaka miasa amin'ny taona 2023/24 ireo vondrona mpamokatra angovo roa ireo. Hanome angovo nokleary i Rosia mba hampandehanana ny asa. Nanaiky ihany koa hampiofana ireo matihanina eo an-toerana sy hamerina ireo fako nokleary efa nampiasaina ho ariana.
‘Rooppur sa Russpur?’
Nanova endrika tanteraka ny endriky ny tanàna kely toa an'i Rooppur, Sahapur ary Notun Hat akaikin'i Ishwardi ny tetikasa toby famokarana herinaratra, ka manatsara ny fiveloman'ny mponina.
Iray amin'ireo fiovana voalohany tsikaritry ny olona ny fananganana trano misy rihana 20 any amin'ny faritra lavitra toa an'i Notun Hat, izay vita tamin'ny taona 2018 teo ho eo. Nanomboka nitsidika sy nizara ny traikefany ireo bilaogera fitsangatsanganana, araka ny hita ao amin'ity vilaogy avy amin'ny Global Entertainment ity, navoaka tao amin'ny YouTube tamin'ny 2020:
Tena tafiditra lalina tokoa ny kolontsaina ka lasa hita ho hafa mihitsy ny firafitry ny mponina ao amin'ny faritra. Tokotokony ho 4000 eo ho eo ny mpiasa avy any Rosia, India, Okraina, Belarosia ary ireo mpikambana teo aloha tao amin'ny Firaisana Sovietika lasa vondron-kery arakasa ao an-toerana manao ny tetikasa. Mihoatra ny 20.000 ny olona miasa ao amin'ny toby sy ireo fotodrafitrasa mifandraika aminy, ary mihoatra ny 3.000 ireo mpiasa mpiteny rosiana sady miteraka fiantraikany goavana eo amin'ny mponina ao an-toerana ny fisian-dry zareo. Matetika ireo vahiny mpiasa ireo mizara ny fiainany ao Rooppur ao amin'ny media sosialy:
Amin'izy ireny, angamba ny vilaogy miavaka indrindra dia ny Rosia kely eto Bangladesh an'i Olga Totckaia, izay hita tamin'ny tatitra navoakan'ny BBC Bangla tamin'ny 21 oktobra :
Ao amin'ny video, nanamarika i Totckaia fa ankoatra ireo fihariana miorina akaikin'ny onenan'ny vahiny mpiasa, maro amin'ireo mpitam-barotra ao an-toerana manakaiky ny tanànan'i Ishwardi no namoaka ny fiteny rosiana mba ahafahana mifanerasera, nahatonga an'i Ayesha Siddika haneho hevitra:
Ity ny video nahavalalanina ahy indrindra hatramin'izay. Tiako ity tanàna rosiana kely ity. Tiako itony tanàna Bengali kely itony hiorina ao Rosia ihany koa. Andao ampahafantarintsika ny Rosiana ny fiteny sy ny kolontsaina Bengali.
Nisioka ny mpianatra iray ao amin'ny Oniversiten'i Dhaka:
Toa hofoanako ny dia kasaiko ho atao any Rosia amin'ny manaraka
Efa eto i Rosia ry sakaiza, eto Pabna.
Ao amin'ny bilaoginy i Anowar Nurul Islam nanoratra ity fifanakalozana fiteny sy kolontsaina ity:
Maro ny zavatra niova tao anatin'ny roa taona sy tapany. Manomboka amin'ireo saloons ao an-toerana ka hatramin'ny toeram-pivarotana lehibe na tsenam-barotra, fivarotam-boankazo na tsenan'ny trondro sy ny hena, ahitana tarehintsoratra rosiana ny ankamaroan'izy ireny eo amin'ny takelaby famantarana. Ahitana Rosiana maro tampoka amin'ireo toeram-pisakafoana mihaja na fisotroan-kafe manakaiky ny trano fonenana. Misy ihany koa ny fifanakalozana kolontsaina eo amin'ireo vahiny mpiasa miezaka ny hifanerasera amin'ireo mpitam-barotra amin'ny fiteny Bengali ary maro ireo mpitam-barotra no mianatra fiteny rosiana. Misy ihany koa ny sasany amin'ireo avy ao an-toerana no mianatra manoratra amin'ny fiteny rosiana. Porofon'izany ity takelaka nosoratan-tanana ity.
Takelaka amin'ny fiteny rosiana ao Ruppur, Ishwardi, Bangladesh. Nopihana avy amin'ny lahatsary YouTube an'i Olgesh.in.Bangladesh. Ampiasaina araka ny mety.
Fifanakalozana ity izay mahafa-po ireo Rosiana mpila ravinahitra ny mandray anjara amin'izany. Nilaza tamin'ny The Daily Sun ny talen'ny Rosiana Atomstroyexport (ASE) ao Bangladesh, IA Tupilov , fa “tsara ny fikarakaran'ny mponina ny Rosiana.”
Na dia eo aza ny hafanam-pon'ny rehetra, dia mety ho very ny zavatra sasany amin'ny fandikana — anisan'izany ny fanononana ny anaran'ilay tanàna. Tao amin'ny lohahevitra iray tao amin'ny pejy Facebook ROSATOM Azia Atsimo, nananihany i Shoaib Nury hoe:
Rooppur sa Russpur? Hamarino indray ny anarana tsy ofisialy ankehitriny. Efa nanome anarana vaovao ny tanàna ireo Rosiana mpila ravinahitra . 🇧🇩❤️🇷🇺
Mazava ho azy, ao anatin'ny rafitra fanohanana ny tetikasa goavana toy izao, dia nisy ny fampandrosoana ara-fotodrafitrasa goavana maro teo amin'ny faritra manodidina. Tsenambarotra maro, toeram-pivarotana lehibe, toeram-pitsangatsanganana, hopitaly ary hotely avo lenta no naorina tany Pakshi, Sahapur, Rooppur ary Ishwardi, izay mamaly ny filan'ny vahiny isan'andro—sy olona an'arivony ao an-toerana, izay maro amin'izy ireo no tsy an'asa teo aloha, nahita asa amin'ny maro amin'ireo fihariana vaovao ireo. Naorina ihany koa ny lalamby vaovao mirefy 27 kilaometatra, seranan-dreniranotsambo ary lalana rarivato mirefy 100 km ao amin’ny Upazila.
Araka ny napetrak’i Shaukat Akbar, talen'ny tetikasa ao amin'ny Tobim-pamokarana angovo nokleary ao Rooppur:
Tsy mandeha bisikileta intsony ny ankamaroan’ny mpiasa any an-toerana. Efa niakatra mandeha môtô ry zareo Nilaza ny Rosiana fa rehefa vita ny tetikasa dia hanana fiara ny mpiasa sasany. Rooppur no toby nokleary voalohany ao amin'ny firenena. Manova ny fiveloman'ny olona maro ity tetikasa ity. Mihatsara ny fiainana.